Konke okuzayo nokuqhubekayo ku-Netflix, Movistar + ne-HBO ngoMeyi | Izindaba zamagajethi
Konke okuzayo nokuqhubekayo ku-Netflix, Movistar + ne-HBO ngoMeyi
Silapha nawo wonke umqulu wakho wezindaba wenyanga, Ngabe usuvele ukulungiselele ukuhlinzekwa ngopopayi, iziphuzo ezibandayo nazo zonke izinhlobo zokudla okulula? Kuzofanele silwe nalesi sikhathi esimnandi esisenzayo futhi esimema ukuba siphume sijabulele uhambo olududuzayo esikhundleni sokuba nomncintiswano omuhle womdlalo wethu owuthandayo. Ikhathalogu iyanda futhi inciphe ngasikhathi sinye, yingakho sikulethela lolu hlu, njengezinyanga zonke, ongahlala usesikhathini nazo zonke izindaba maqondana nochungechunge namafilimu avela kuzingxenyekazi ezinkulu zethelevishini lapho zifunwa khona ISpain.
Ngakho-ke, siya lapho nakho konke esikulungisile, silungiselele ipeni nephepha, noma okungcono, bhukumaka lokhu okuthunyelwe, ngoba ngeke ube nesikhathi sokubuka yonke into ku-Netflix, Movistar + naku-HBO.
Njengenjwayelo, sizoshiya konke kukhonjiswe kahle, ngakho-ke okokuqala sizoqhubeka neNetflix, ipulatifomu yethu esiyithandayo futhi ngokujwayelekile enikela ngokuqukethwe kakhulu, yize le nyanga kaMeyi ibuthaka impela.
1 Yini okusha on Netflix for May 2017
2 Yini okusha on HBO for May 2017
3 Yini okusha at Movistar + for May 2017
4 Kungabiza malini ukuqasha insizakalo ngayinye?
Yini okusha on Netflix for May 2017
Futhi kungani sithi ikhululekile? Ake siqale ngalokho ukuthi iNetflix isinika kuphela uchungechunge lwama-premiere amabili kule nyanga. Kunzima ukuhambisana nejubane elethwe yiNetflix ezinyangeni ezedlule, futhi ukufika kwentwasahlobo kwenza abantu banqume ukuchitha amahora ambalwa phambi kwethelevishini nokuningi kweminye imisebenzi yokuzijabulisa. Siyabonga iNetflix ngokuhamba kahle nezikhathi zethu zasebusika nobusuku, zifudumele ngaphansi kwengubo.
Uchungechunge lokuqala lwe-premiere esinikezwa yiNetflix kulo Meyi Abantu abathandekayo abamhlophe, eyaqala ukukhonjiswa ngo-Ephreli 28, futhi iluchungechunge olususelwa kubhayisikobho eyakhishwa eminyakeni eminingi edlule, kuyo sizolandela umsebenzi wesikhungo lapho sizokwazisa khona izinhlobo ezahlukene zokubandlululwa ngokohlanga. Okuthile okufana nalokho ayekufuna ngaziwa kakhulu Ngo-13 izizathu, ngalesi sikhathi iNetflix ibuye ikhange umqondo wethu wobuntu.
Siyaqhubeka nokubhingo nge Ana, uchungechunge luvumelanisa inoveli eqanjiwe ebhalwe nguLucy Maud Montgomery futhi ezoshaya endaweni yesikhulumi ngoMeyi 12, 2017. Kuwo, umuntu okhishwe inyumbazane kuzodingeka abhekane nabo bonke ubunzima esingabucabanga ebusheni, ethanda ukuba yingxenye yomlando eyisisekelo, kungaba kanjani ngenye indlela. Uchungechunge luhlelwe ngasekupheleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye futhi umlingiswa wakhe onomusa uzokugcina unamathele esikrinini.
Siyaqhubeka nalo lonke uchungechunge oluvuselela izinkathi ukuze sibe nesikhathi esimnandi kuNetflix:
Sense8: Isizini 2 Ifika ngoMeyi 5
Okunganqamuki uKimmy Schmidt: Isikhathi sonyaka 3 sifika ngoMeyi 19
Umugqa wegazi: Isizini 3 Ifika ngoMeyi 26
Umbuso Wokugcina: Isizini 2 Ifika ngoMeyi 29
I-F eyomndeni: Isizini 2 Ifika ngoMeyi 30
Master Lutho: Isizini 2 Ifika ngoMeyi 12
I-Kazoops (okuqukethwe kwezingane): Isizini 3 Ifika ngoMeyi 5
Kepha iNetflix ayiphili nje kuphela kusuka ochungechungeni, futhi uyakwazi lokho uma ungumsebenzisi wengxenyekazi, lawa ama-movie lokho kusilethela uMeyi, futhi esingagqamisa kukho kuphela Ukuvakasha, i-movie ethusayo nengabazekayo ezosigcina sinamathele kusofa, kuyo abanye abantu abasha banquma ukuvakashela ogogo nomkhulu babo abangabazi, kodwa bagcina imfihlo engaqondakali ongase ungafuni ukuyazi.
Umshini wempi: Kusukela ngoMeyi 26
I-Midhorn: Kusukela ngoMeyi 12
Muhle: Kusukela ngoMeyi 5
Esithunzi se-Iris: Kusukela ngoMeyi 1
Ukuvakasha: Kusukela ngoMeyi 15
Loev: Kusukela ngoMeyi 1
I-Anacleto: Umenzeli Oyimfihlo: Kusukela ngoMeyi 13
Iculo lothando: Kusukela ngoMeyi 15
ISahara: Kusukela ngoMeyi 12
Sola!: Kusukela ngoMeyi 19
Futhi ekugcineni, lezi yizona imibhalo ukuthi iNetflix ilungiselela ukwazi kakhulu:
Isizukulwane seMars: Kusukela ngoMeyi 5
Abagcini: Kusukela ngoMeyi 19
Ngidlulisele kuRoger Stone: Kusukela ngoMeyi 12
UJoshua: Teen vs Superpower: Kusukela ngoMeyi 26
I-Laerte-se: Kusukela ngoMeyi 19
Kunconyiwe: Kusukela ngoMeyi 1
Ukulahlekelwa Ukubona Kwasogwini: Kusukela ngoMeyi 1
Yini okusha on HBO for May 2017
Sishintsha ipulatifomu, manje siphendukela kubaphathi be- Umdlalo Wamakhosi, ipulatifomu efikile eSpain ngenhloso yokuphikisa isikhundla somholi esingenakuphikwa seMovistar, + yize kuzoba nzima lapho iNetflix nayo ikhetha ucezu lwayo lwekhekhe. I-HBO nayo ayihehi ngokweqile ngale nyanga kaMeyi, kepha ivuselela izinkathi kolunye uchungechunge oludume kakhulu, kanye ne-movie edlala phambili Robert De Niro ukuthi ngeke ufune ukulahlekelwa nguwe. Ake siye lapho nge uchungechunge esilulethelwa yi-HBO kulenyanga kaMeyi 2017.
Ibhizinisi: NgoMeyi 24, lolu chungechunge lomkhiqizo waseNingizimu Melika kanye nezindlu zokuqala ze-HBO eSpain, bekungahluka kanjani. Kuwo bagxila kakhulu ekutheni umhlaba wobufebe ungaba mnandi futhi ulimaze kanjani kubantu besifazane. I-premiere yamasizini ayo amabili okuqala ihambisana nayo, idlala imarathon.
Okuvamile: Kusukela ngoMeyi 1 ku-HBO sinesizini 3. Kusuka kumdlalo weqophelo kuya kumahlaya, kuwo sibhekene nenkinga ejwayelekile yalesi sikhathi, umfowethu nodadewethu baphoqeleka ukuthi bahlale ndawonye ngemuva kwezinkinga eziningi ezifana nokungashadi kanye nesehlukaniso Kokubili. Ukuhlalisana kwabantu lapho sikhuluma khona kuveza izimo eziningi zamahlaya ezibambe lolu chungechunge kwaze kwaba yisizini yesithathu. Kulesi senzakalo, ukukhonjiswa kwesizini kubanjwa ngasikhathi sinye ne-United States of America.
Futhi siya ku amabhayisikobho, ngoba bebengekho ku-HBO, futhi ikakhulukazi uma sicabanga ukuthi sizoba noRobert De Niro ozolingisa komunye wabo. Sizogqamisa UMad Max Fury Road, kanye nalesi siqalo somkhiqizo we-HBO njengoba unjalo Isilekeleli Samanga.
Umdlalo ka-Ender: Kusukela ngoMeyi 1
Abavukeli: Kusukela ngoMeyi 1
Inethiwekhi: Kusukela ngoMeyi 1
Saw IV: Kusukela ngoMeyi 1
I-Superhero Movie: Kusukela ngoMeyi 1
Mortdecai: Kusukela ngoMeyi 10
UMad Max Fury Road: Kusukela ngoMeyi 14
Isilekeleli Samanga: Kusukela ngoMeyi 21
Inkosi Yamanzi: Kusukela ngoMeyi 24
IPirates yaseCaribbean: Isifuba Somuntu Oshonile: Kusukela ngoMeyi 1
Igajethi Yomhloli: Kusukela ngoMeyi 1
I-Mermaid encane: Kusukela ngoMeyi 1
I-Mermaid Encane 2: Kusukela ngoMeyi 1
Umsuka weMermaid Encane: Kusukela ngoMeyi 1
Kokuqukethwe kwamasiko, i-HBO futhi isishiyela ama-premieres amabili we imibhalo: Isexwayiso: Lo Muthi Ungakubulala, futhi ngakolunye uhlangothi Umama ufile futhi uyathandeka.
Yini okusha at Movistar + for May 2017
EMovistar +, njengoba wazi kahle, okubaluleke kakhulu ama-premieres ochungechunge lwethelevishini namafilimu asezingeni elidume kakhulu kunalawo amapulatifomu angaphambilini. Lawa amafilimu afika eMovistar + ngoMeyi:
Umakhenikha: Kusukela ngoMeyi 1 ngo-22: 00 ebusuku.
UCaptain Fantastic: Kusukela ngoMeyi 2 ngo-22: 00 ebusuku.
UTom epulazini: Kusukela ngoMeyi 3 ngo-22: 00 ebusuku.
Isiteshi Seoul: Kusukela ngoMeyi 4 ngo-22: 00 ebusuku.
Ukuphuza Intukuthelo: Kusukela ngoMeyi 5 ngo-22: 00 ebusuku.
Ikusasa: Kusukela ngoMeyi 5 ngo-22: 40 ebusuku.
UMary noMax: Kusukela ngoMeyi 10 ngo-22: 00 ebusuku.
I-Inferno: Kusukela ngoMeyi 12 ngo-22: 00 ebusuku.
I-Ice Age: I-Great Thaw: Kusukela ngoMeyi 19 ngo-22: 00 ebusuku.
Kufika Isilo Ezongibona: Kusukela ngoMeyi 26 ngo-22: 00 ebusuku.
Kepha akuzona nje ama-movie, sinezindaba ezisefomini yochungechunge, okungahambisana ngokuqondakalayo namanye amapulatifomu, ngoba iMovistar + inamalungelo okukhipha eSpain:
Indlu yamakhadi: Isizini sesihlanu sifika kuphela eMovistar + kusuka ngo-09: 25 ekuseni
Ukuphakama Kwamawele: Isiqephu se-Double premiere esivela ngobusuku bangoMeyi 21 kuya kuMeyi 22 ngo-4: 00 ekuseni
Ama-Versailles: Isikhathi sonyaka 2 kusuka ngoMeyi 19
Kungabiza malini ukuqasha insizakalo ngayinye?
Netflix Kushibhile ngokuya ngokuqukethwe okunikezayo:
Umsebenzisi oyedwa ngekhwalithi ye-SD: € 7,99
Ikhwalithi ye-HD yabasebenzisi ababili ngasikhathi sinye: € 7,99
Abasebenzisi abane ngasikhathi sinye ngekhwalithi ye-4K: € 11,99
HBO unikeza a imali yesikhathi esisodwa yama-euro angu-7,99 ngenyanga, enamaphrofayela wababhalisile bakudala noma "Umndeni" nokuqukethwe okubhekiswe ezinganeni. Noma kunjalo, abasebenzisi abanenkontileka ye- I-300 MB yefayibha yeVodafone, bayojabulela iminyaka emibili ye-HBO mahhala.
Endabeni I-Movistar + Kunezinye izindlela eziningi, kepha ikakhulukazi kuzofanele sikhethe phakathi kokungeza cishe ama-euro ayishumi ngenyanga uma sifuna i-cinema, nama-euro ayi-10 ngenyanga uma sifuna uchungechunge. Ngaphandle kwakho konke lokhu, sizoba nephakheji yakho yethelevishini ezoba neziteshi zayo bukhoma njenge- # 7 enokuqukethwe okukhethekile. Indlela enhle yokuqasha amaphakheji wethelevishini iMovistar + ukuwahlanganisa nefayibha nokunikezwa kweselula okubiza kancane. Ngamafuphi, uma ufuna uchungechunge nama-movie kuphela, i-Netflix isesezingeni eliphakeme / ukunikezwa kwentengo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Konke okuzayo nokuqhubekayo ku-Netflix, Movistar + ne-HBO ngoMeyi
I-WhatsApp iphansi emhlabeni wonke futhi izohamba ibanga elide
I-eBay, iGoogle Maps neAmazon azisatholakali ku-Apple Watch